INkatha "ibeke phambili abavoti" isebenzisana ne-ANC - Ilanga News
Home Izindaba INkatha “ibeke phambili abavoti” isebenzisana ne-ANC
ITHAMBISE izinhliziyo yabeka abavoti phambili i-IFP, ibuyekeza isinqumo sayo sokudlelana ne-ANC komasipala lapho womabili la maqembu ehluleke wukuthola isibalo esanele sokuphatha ngawodwana emuva kokhetho lohulumeni basekhaya olube mhla lulunye kuLwezi (November).
Phambilini leli qembu lakubeka kwacaca ukuthi kalizimisele ngokuxoxa ne-ANC ngendaba yokuphatha omasipala ngokubambisana, liyisola ngokungathembeki emuva kwezivumelwano elake lazenza nayo phambilini.
Izolo ngoLwesithathu, esigcawini sabezindaba ebesisemahhovisi e-IFP eThekwini, leli qembu ngomlomo kamengameli walo, uMnu Velenkosini Hlabisa (osesithombeni), limemezele ukuthi baxoxile ne-ANC, bagcina ngokuvumelana ngokuthi bazokwesekana ukuze kwakheke ohulumeni basekhaya abazobeka abavoti phambili.
UMnu Hlabisa uthe KwaZulu-Natal, i-IFP ne-ANC yiwona womabili amaqembu ashintshane ngokuhamba phambili ngokuvotelwa komasipala ngaphandle kowaseMngeni lapho kunqobe khona iDA.
Uthe ngenxa yalokhu, bavumelane ngokuthi kulabo masipala okungacacanga ngokugcwele iqembu elinqobile, kuzobusa elinamavoti amaningi kunelinye.
Uthe lesi sivumelwano sabo kasichazi ukwakha uhulumeni wobumbano, kodwa siqonde ukuthi kube noku-thula futhi umphakathi ungahlali isikhathi eside ulinde izidingo.
Wenze isibonelo ngoMasipala weTheku lapho i-ANC inesibalo esikhulu kune-IFP, kodwa yahluleka wukuthola isibalo esanele sokuphatha ngayodwana.
Uthe kumasipala ofana nalona, bazoyekela i-ANC kube yiyona ephathayo ngaphandle kokuyiphazamisa.
“Sikwenza lokhu ngoba sikholelwa kwintando yeningi futhi siyakwamukela ukuthi abavoti kabasinikanga igunya eligcwele lokuphatha, ngakho kumqoka ukuthi siyekele iqembu elibenesibalo esiphezulu kube yilona eliphathayo.
“Njengoba nakomasipala lapho sibe nesibalo esiphezulu, i-ANC izoyekela i-IFP ihole,” kusho uMnu Hlabisa.
Mayelana nokubuyekeza isinqumo sabo sokungasebenzisani ne-ANC, uthe lokhu bakwenze ngoba befuna kusheshe kuqale ukuhlinzekwa komphakathi ngezidingo ngaphandle kokulokhu kuba nomdonsiswano wezikhundla ongenasidingo.
Uthe ngemuva kwemihlangano eyahlukene namaqembu abalelwa ku-17, bakhethe ukuvumelana ne-ANC njengoba amanye amaqembu abenezimfuno ezingaphezulu kokwenza, okubalwa nezikhundla.
Ukuvumelana kwala maqembu kusho ukuthi kungase kushaye usuku lomnqamulajuqu imikhandlu isihlalile, yabukhetha ubuholi bayo ngaphandle kwezihibe.
Kulindeleke ukuba luqale uhlelo lokukhetha izimeya nosomlomo ko-masipala abehlukene njengoba bebalelwa ku-18 omasipala KwaZulu-Natal obekungacaci ngeqembu elizophatha.
Khona manjalo, iDA isale incela izithupha ichayiswa yi-IFP, njengoba ibisithembile ngezingxoxo ebeziqhubeka phakathi kwala maqembu.
IDA isole i-IFP ngokujika ngomzuzu wokugcina. Ithe ibizimisele ngokusebenzisana ne-IFP ngenhloso yokuthi izothola izikhundla zokuba sekomidini lokubhekelela ukusetshenziswa kwemali yomasipala.
IDA ithe lesi senzo se-IFP sikhombisa ukungabathatheli phezulu abavoti, okuyinto ebizimisele ukuyenza komasipala abebezosebenzisana kubona.
Previous articleOkamsakandi uzohlanganisa amaciko akwaZulu nawakwaXhosa
Next articleIsalukazi (60) siboshelwe izinkomo zokwebiwa